Xaaladda Galkacyo oo degan iyo dhaqangelinta heshiiskii labada dhinac oo socda. – Radio Daljir
Xaaladda Galkacyo oo degan iyo dhaqangelinta heshiiskii labada dhinac oo socda.
Noofember 14, 2016 9:50 g 0
Galkacyo, Nov 15 2016–Xaaladda magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa saaka degan kadib dagaalo kasocdey mudo 40 maalmood kudhow oo lagu soo afmeeray heshiis dhowaan kadhacay islamagaaladaasi.
Wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya aaga jiida hore ayaa sheegaya in weli ciidamada labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ay isku horfadhiyaan meelihii lagu dagaalamay.
Waxaa maraysa heer dhammaad ah sayladdii loogu talagalay in lagu kala wareejiyo xoolaha ka imaanaya koonfurta Soomaaliya ee kuwajahan Boosaaso waxaana lafilayaa in dhowaan laga bilaabo shaqadii loo igmaday dhismeheeda.
DHEGEYSO-Darawaliinta Boosaaso oo ka cabanaya burburka wadooyinka magaalada.
DHEGEYSO-Bahda waxbarashada Puntland oo ka qaybqaadanaysa gurmadka abaarta.